Fisokafana tendro manokana :: Orinasa dimy ambin’ny folo efa afaka mandray mpizatra asa • AoRaha
Fisokafana tendro manokana Orinasa dimy ambin’ny folo efa afaka mandray mpizatra asa
Tsy latsaky ny dimy ambin’ny folo, hatreto, ny isan’ireo orinasa afaka handray mpianatra hizatra asa, taorian’ny fametrahana ny Tendro manokana na ny “pôle stage” hampivondronana ireo tanora mitady fizarana asa sy ireo orinasa mitady mpizatra asa. Misy ireo dingana harahina momba ny fandraisana mpizatra asa saingy miato aloha ankehitriny noho ny hamehana ara-pahasalamana.
“Napetraka ny fandaminana, toy ny fampiofanana ireo mpiara-miombon’antoka sy ny fidinana eny amin’ny orinasa handray an’ireo mpizatra asa. Efa vonona ny hoenti-manana rehetra nefa tsy tanteraka noho ny fepetra amin’ny hamehana ara-pahasalamana, toy ny tsy fahazoana mamory olona maro sy ny fikatonan’ny oniversite”, araka ny fanazavan-dRakotomanana Evelyne, tale mpanatanteraka eo anivon’ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (SIM).
Noraisina hatrany kosa ireo mpianatra tonga teny amin’ny SIM nanatitra taratasy milaza ny mombamomba azy sy ny fizarana asa tadiaviny. Miankina amin’ny fangatahana ataon’ny eny anivon’ny oniversite sy ny fepetra rehetra mifandray amin’izany anefa no handraisana azy ireny.
Fepetra famarotana fanafody :: Voasakan’ny tsy fanarahan-dalàna ny fanjifana ny « ED1 »